Amb Yuusuf Garaad oo tariikh dheer ka qoray AUN Cabduqadir Mursal
Friday October 02, 2020 - 17:47:09 in Wararka by Mogadishu Times
Cabdulqaaddir Maxamed Mursal, oo ku geeriyooday Mareykanku, wuxuu ahaa hal abuur, weriye, macallin iyo farshaxan. Allah ha u naxariistee. aan in badan wada shaqeynay, wax wada barannay, intii burburku jirayna aan marar bandan ku kulannay dalka gudihi
Cabdulqaaddir Maxamed Mursal, oo ku geeriyooday Mareykanku, wuxuu ahaa hal abuur, weriye, macallin iyo farshaxan. Allah ha u naxariistee. aan in badan wada shaqeynay, wax wada barannay, intii burburku jirayna aan marar bandan ku kulannay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, wakhtiyada qaarna aan iska warqabnay. Sadarradan ayaan ku soo koobayaa qaar ka mid ah xusuusteyda mufakir Mursal. Mursal, 1982 ayaan fool-ka-fool isu aragnay, markii aan isku dufcad, casharrada qaar isla qaata, ka noqonnay Kulliyadda Luqadaha ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Maaddaama uu ahaa weriye caan ah, sannado badan oo xilligaas ka horreeyay ayaan magaciisa iyo codkiisaba aqaannay, hal abuurkiisuna uu i soo gaaray. Macaamil toos ah waxaan yeelannay sannadkii xigay. Cabdulqaadir M. Mursal ma ahayn sideyda oo kale nin markaas uun ka soo baxay Dusgi Sare ee soo dhammaystay sannad Shaqada Qaranka ah. Si uu Jaamacadda u dhigto, Cabdulqaadir wuxuu wareejiyay xilkii uu u hayay Waaxda Idaacadaha ee Wasaaradda Warfaafinta. Waaxda waxaa hoos imaanayay Radio Muqdisho iyo Radio Hargeysa. Mursal wuxuu ahaa Madaxa Radio Muqdisho. Musral wuxuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan, af suubban, dadka aan ka daba shaqeyn oo ahlu diin ah. Mursal wuxuu ahaa bulshay, xikmad badan oo aan isla weyni aqoon. Wuxuu ahaa soo saare hal abuur sarreeya. Dareenkeeda bulshada dhug u leh kuna sargooya curintiisa. Taas oo keentay in aad loo xiiseeyo waxna laga barto soo saarkiisa.
w/Q: Amb. Yuusuf Garaad wasiir ku hore arrimaha dibadda